ओली लोकतन्त्रका लागि होइन, हत्या मुद्दामा १४ वर्ष जेल बसेका हुन् : रामचन्द्र पौडेल – Dullu Khabar
ओली लोकतन्त्रका लागि होइन, हत्या मुद्दामा १४ वर्ष जेल बसेका हुन् : रामचन्द्र पौडेल
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार २३:२४
रामचन्द्र पौडेल । फाईल तस्वीर
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लोकतन्त्र प्राप्तीका लागि नभइ हत्या मुद्दामा जेल बसेको बताएका छन् । बिहीबार तनहुँको व्यास १, १० र ११ जोड्ने बुल्दी खोलामा बनेको पुल उद्घाटन गर्दै नेता पौडेलले ओली कहिल्यै लोकतन्त्रका लागि जेल नबसेको बताए ।
उनले भने, ‘ओली कहिल्यै लोकतन्त्रका लागि जेल बसेनन्, उनले लोकतन्त्रका कुरा नगर्दा हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘कम्युनिष्टहरू लोकतन्त्रवादी हुँदैनन् । ओली झापा काण्डमा व्यक्ति हत्या मुद्दामा १४ वर्ष जेल बसेका हुन् ।’
कसैले पनि ओली लोकतन्त्रका लागि जेल बसे भनेर भन्‍न नसक्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘कसले भन्यो ओली लोकतन्त्रको नाममा १४ वर्ष जेल बसे भनेर ? ज्यान मुद्दामा बसेको हो,’ उनले भने, ‘कहाँबाट लोकतन्त्रका लागि बसे ? रामचन्द्र पौडेलजस्तो आस्थाका लागि बसेको होइन ।’
राष्ट्रवादको कुरा गर्ने ओलीले हालै ३ घन्टासम्म बालुवाटारमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’सँग कुराकानी गरेको उनको आरोप छ । ‘मलाई लागेको थियो, केपी ओली सुध्रे होलान् भनेर । तर सध्रने त कुनै छाँट छैन । कम्युनिष्ट कहिल्यै लोकतन्त्रवादी हुँदैनन्,’ उनले भने ।
उनले तनहुँको घटनाले प्रजातन्त्रवादीहरू देशैभर जागेको पनि बताए । उनले अब भ्रष्टाचारविरुध्द पनि आन्दोलन केन्द्रित हुने बताए । ‘ठूला-ठूला घोटाला गर्नेहरू, अर्बौँको काण्डका रचयिताहरुलाई संरक्षण दिन, साना भुरा माछा खाँदै हिँड्ने त्यो अख्तियारलाई पनि ठेगान लगाउने आन्दोलन हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘अबको आन्दोलन अख्तियारको घाँटी समाउने मात्र होइन न्यायीक निकायलाई पनि सावधान गर्ने आन्दोलन हुन्छ । अब यहाँ सत्ता हेरेर फैसला गर्ने ? अब हुन सक्दैन ।’
त्यस्तै, उनले तनहुँबाट सुरु भएको सर्वसत्तावादविरुध्दको आन्दोलन उसै नरोकिने बताए । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सही अर्थमा साकार नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने उनले घोषणा गरे । पुल उद्घाटन कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई, प्रदीप पौडेल पनि सहभागी थिए ।
नेता पौडेललाई प्रहरीले धरपकड गरेको विरोधमा तरुण दलले पोखरामा प्रदर्शन गरेको छ । तरुण दलले बिहीबार बृहत र्‍यालीसहित महेन्द्रपुलमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
तनहुँको बुल्दी खोला पुलको उद्घाटन गर्न जादैगर्दा बुधबार पौडेललाई प्रहरीले ३ घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छोडेको थियो ।